Degso Video and Audio Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Video and Audio Barnaamijyada
Fraps waa barnaamij duubista shaashadda oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay duubaan fiidiyowyo ay ku ciyaaraan, ka qaataan shaashadaha iyo inay cabiraan kombiyuutarkooda Fraps, waa mid kamid ah softiweerradii ugu horeeyey ee maskaxda ku soo dhaca markay timaado toogashada fiidiyowyada ciyaarta, waa shaashad duubista fiidiyowga...
Apple Music Converter waa barnaamij ballaarin kara xakamayntaada faylasha muusikada. Waad u rogi kartaa feylashaada muusikada qaababka aad rabto oo aad uga ciyaari kartaa qalabkaaga barnaamijka, oo aad ku rakibi karto kombuyuutarkaaga iskuna daydo bilaash. Apple Music Converter, oo ah utility-ga loo baahan yahay muusikada jecel, wuxuu...
Adobe Premiere Pro waa barnaamij waqtiga firaaqada ah oo fiidiyoow leh oo leh fikradda waqtiga loogu talagalay in lagu hagaajiyo habka wax soo saarka fiidiyowga. Waxaad soo dejin kartaa ama ka dhoofin kartaa dhammaan noocyada qaabab warbaahinta barnaamijka. Barnaamijka, halkaasoo aad wax uga beddeli karto illaa 10,240 x 8,192 qaraarka,...
Gihosoft TubeGet waa soo dejiyaha fiidiyowga YouTube-ka oo bilaash ah. Haddii aad u baahan tahay barnaamij inaad ku soo dejiso fiidiyowyada YouTube kombiyuutarka, u soo dejiso fiidiyowyada YouTube-ka MP3, u soo dejiso liistada YouTube, waxaan kugula talinayaa Gihosoft TubeGet. Gihosoft TubeGet, oo ka mid ah kuwa soo dejiya fiidiyowga...
Soo dejiso Bandicam Bandicam waa duubista shaashadda bilaashka ah ee Windows. Si gaar ah, waa barnaamij duubitaan shaashad yar ah oo wax walba ku qabsan kara kombiyuutarkaaga oo ah fiidiyow tayo sare leh. Waxaad ku duubi kartaa aag gaar ah shaashadda PC -ga, ama waxaad duubi kartaa ciyaar adiga oo adeegsanaya tikniyoolajiyadda garaafyada...
PowerISO waxay ka mid tahay aaladaha abuurista disc ee ugu caansan ee aad tixraaci karto markay timaado CD, DVD ama faylasha sawirka Blu-Ray. PowerISO asal ahaan waa barnaamij loogu talagalay in lagu daboolo dhammaan baahiyahaaga ku saabsan feylasha qaabka sida ISO, BIN, NRG, CDI, DAA iyo wixii la mid ah. Adiga oo isticmaalaya...
Diiwaan geliyaha shaashadda Apowersoft Desktop waa qalab fudud oo loo isticmaalo desktop kaas oo aad ku qaadan karto ama ku keydin karto shaashadaha kombiyuutarkaaga. Waxaad u rogi kartaa foomamka wax lagu qoro ee WMV qaababka AVI, MP4, FLV iyo SWF iyadoo la adeegsanayo aaladda beddelka oo lagu daray barnaamijka badbaadinaya shaashadda...
Tifaftiraha WavePad Sound waa qalab tafatirka dhawaaqa iyo duubista oo uu isticmaali karo kombiyuutar kasta oo adeegsada. In kasta oo ay tahay barnaamij si fudud loo adeegsado, haddana waxa ku jira aalado maqal oo badan oo xirfadlayaal ah. Liiska soo bixi doona inta lagu guda jiro rakibida barnaamijka, waxaad fursad u leedahay inaad ku...
iFun Screen Recorder waa barnaamij si sahlan loo isticmaali karo oo bilaash ah duubista shaashadda ee loogu talagalay dadka isticmaala Windows PC. Rikoodhka shaashadda ugu fiican ee ganacsiga, waxbarashada, ciyaaraha, shaqsiyan, munaasabad kasta. Waxaan kugula talineynaa barnaamijka duubista shaashadda xirfadleyda ah, oo leh astaamo...
Iyada oo leh 15 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta, Shazam waa habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu heli karo muusig cusub. Codsiga muusigga caanka ah, oo gebi ahaanba bilaash ah, wuxuu aqoonsan yahay muusigga hadda ciyaara waqti gaaban wuxuuna kaa caawinayaa inaad barato magaca heesta aad xiisaynayso. Waxa kaliya...
Si sax ah u burburi firam fiidiyow ah, tirtir qaybaha aan loo baahnayn oo ku milmaan boodhadhka hal guji. Tani software tafatirka software taageertaa tafatirka videos la 16: 9, 4: 3, 1: 1, 9:16 iyo 3 4 saamiga dhinac. Fiidiyowgaaga waxaa lagu taageeri doonaa si habsami leh dhammaan nidaamyada hawlgalka. BeeCut waa tifaftire fiidiyoow ah...
GOM Encoder waa fududahay in la isticmaalo oo dhakhso loogu beddelo fiidiyoowga isticmaalayaasha Windows. Beddelaad fiidiyoow ah oo awood leh oo leh talooyin ballaadhan iyo qaab soo saarid wax soo saar leh, beddelaad fara badan, Intel Quick Sync Video taageero, astaamo fiican sida ku darista cinwaannada hoose, ka saarista maqalka, ku...
DaVinci Resolve wuxuu ka codsanayaa dadka isticmaala ee raadinaya barnaamij xirfadeed oo bilaash ah oo loogu talagalay tafatirka fiidiyowga. Blackmagic Design DaVinci Resolve, oo ka mid ah barnaamijyada tafatirka fiidiyowga ee loogu talagalay adeegsiga xirfadleyda, ayaa loo isticmaali karaa Windows PC, Mac iyo Linux. Waad soo dejisan...
DJ Virtual waa barnaamij isku dhafan oo mp3 ah. Waxaad dareemi doontaa inaad tahay DJ dhab ah oo aad ugu mahadsantahay barnaamijkan aadka u wanaagsan ee xitaa DJ-yada adduunka caanka ka ah sida Carl Cox ay kumbuyuutarradooda ku hayaan Barnaamijkan, oo uu jeclaan doono qof kasta oo jecel inuu la macaamilo muusikada, waa wax aad u fudud in...
Krisp waa barnaamij buuqa baajiya oo dadka isticmaala Windows PC ay ku soo dejisan karaan kuna isticmaali karaan bilaash. Waa barnaamij weyn oo aad u adeegsan karto inaad ku joojiso buuqa asalka ah isla markaana aad ku baabiiso buuqa asalka ah intaad ku baahinayso fiidiyowga lagu wada sheekaysanayo, codka lagu soo waco iyo YouTube-ka,...
AnyBurn waa barnaamij yar oo fudud oo aad u isticmaali karto inaad ku gubto xogta CD-gaaga, DVD-yada iyo qalabka Blu-ray. Barnaamijkan oo si fudud ay u isticmaali karaan adeegsadayaasha kombuyuutarrada heer kasta leh, ayaa loo soo saaray qaab fudud oo aan u baahnayn khibrad kombuyuutar. Barnaamijka, oo aad ku bilaabi karto adeegsiga...
8K Player waa fiidiyoow fiidiyoow ah oo aad ku isticmaali karto kombiyuutaradaada desktop-ka. Iyadoo 8K Player, oo leh astaamo ka awood badan kuwa asaageeda ah, waxaad ku furi kartaa fiidiyowyo ilaa 8K xal ah. 8K Player waa ciyaaryahan bixiya khibrad daawasho oo aad u fiican. Iyada oo ciyaaryahanka, waxaad furi kartaa fiidiyowyada...
Audacity waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu guulaha badan ee nooceeda ah, waana tafatir badan oo maqal ah iyo barnaamij duubitaan maqal ah oo aad kala soo bixi karto una isticmaali karto gebi ahaanba bilaash. In kasta oo Audacity uu lacag laaan yahay, haddana waxaa ku jira astaamo hodan ah oo horumarsan. Adiga oo adeegsanaya...
CamDesk waa barnaamij duubista websaydhka oo bilaash ah kaas oo ka caawiya dadka isticmaala duubista fiidiyowga webka iyo inay qaadaan sawirro kamarad. Markii aan iibsanayno kaamirada websaydhkayaga, waxaan ku xireynaa kumbuyuutarkeena oo waxaan bilaabaynaa sheekaysiga fiidiyowga. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in loo isticmaalo...
Express Burn waa barnaamij gubasho CD / DVD / Blu-ray ah oo sameeya dhammaan hawlgallada ay ku qabtaan cabbirka faylka yar iyo isticmaalka fudud, oo ka duwan barnaamijyo badan oo awood badan oo adag oo ku jira qaybta gubashada CD / DVD. Codsigan qaaska ah waa bedel lagu guuleysto oo loo maro Nero, oo ka mid ah codsiyada ugu badan ee ay...
In kasta oo sanadihii iskudhafku dhammaadeen, fannaaniin badan iyo kuwa jecel muusigga ayaa sii wada inay ku dadaalaan inay abuuraan waxyaabo cusub iyagoo isku daraya qaybo ay jecel yihiin. Haddii la adeegsanayo sagxad dhab ah oo DJ ah ayaa u muuqata mid aad u dhib badan oo wareersan, sidee ku saabsan hagaajinta naftaada adoo bilaabaya...
EaseUS, oo aan ku ognahay barnaamijyadeeda guulaha leh ee ay illaa iyo hadda soo saartay, ayaa bilaabay barnaamijkeeda cusub. EaseUS RecExperts, oo loo isticmaali karo hababka duubista shaashadda Windows, ayaa ku guuleysatay inay soo jiidato dareenka leh astaamaha kala duwan ee ay bixiso. Duubista shaashadda, wadaagista sawirka la...
Diiwaan geliyaha maqalka ee Apowersoft waa barnaamij waxtar leh oo la isku halleyn karo kaas oo kuu ogolaanaya inaad duubto codka adigoo kaashanaya makarafoon iyo durdurro maqal ah. Kadib sameynta dejinta makarafoonka, waxaad dejin kartaa waqtiga aad ku bilaabi karto duubista codka adigoo kaashanaya qalabka waqtiga ku jira barnaamijka. ...
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan waxaa looga saaray ogaanshaha barnaamijyada xun xun. Waad baari kartaa qaybtayada Foomamka beddelaya ee aad ka heli karto barnaamijyo kale. Beddelaadaha AVI ee bilaashka ah waa barnaamij qaab beddel wax ku ool ah, dhakhso leh oo bilaash ah oo kaa caawin doona inaad u beddesho qaababka AVI ee fiidiyowga...
Easy Audio Converter waa beddelaha maqalka ee waxtarka leh oo u rogi kara qaabab badan oo faylal maqal ah. Barnaamijku wuxuu kaa caawinayaa kiisaska sida WAV ilaa MP3, taas oo ah, inaad MP3 ka sameyso faylka WAV. Qalabka qaar ayaa la jaan qaadaya qaabab maqal ah qaarkood. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay in loo beddelo qaabab maqal...
Spotify, mid ka mid ah codsiyada dhegeysiga muusikada ee aadka loo doorbido muddo dheer, wuxuu rafcaan u dirayaa dhammaan noocyada dhageystayaasha muusikada maaddaama ay siiso kaydkeeda muusig ballaadhan bilaash. Codsiga Spotify Windows, waxaad si fudud u dhagaysan kartaa muusikada aad rabto. Waad soo dejisan kartaa arjiga adoo riixaya...
StaffPad waxaa loogu talagalay halabuureyaasha doonaya inay si dhib laaan ah u qoraan muusikada iyagoo adeegsanaya aqoonsiga farta lagu qoro. Si fudud u qor muusikadaaga adoo adeegsanaya qalin Apple; barnaamijku wuxuu u rogayaa bar kasta far qurux badan oo macquul ah isla markaana wax laga beddeli karaa iyadoo la adeegsanayo taabashada...
Ashampoo Video Deflicker waa barnaamij aad u adeegsan karto si aad ugu hagaajiso dhalaalka fiidiyowyadaada. Barnaamij weyn oo si otomaatig ah u hagaajiya fiidiyowyo gariira, oo ay ku jiraan kuwa ruxruxa, oo badiyaa laga helo duyuuradaha aan duuliyeyaasha lahayn ama duullimaadyada. Cabbir yar oo aad u fudud in la isticmaalo! Haddii aad...
Diiwaan geliyaha Spotify waa barnaamij bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad keydiso dhamaan heesaha aad ka dhageysato Spotify isla markaana aad kala soo baxdo kombiyuutarkaaga. Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha Spotify, oo ah mid ka mid ah adeegyada muusikada ugu ballaaran ee dijitaalka ah ee adduunka, mahadnaqa barnaamijkan, waxaad...
Diiwaan-gelin kasta oo fiidiyoow ah waa barnaamij aad u faaiido badan oo la isku halleyn karo oo loo sameeyay si loogu oggolaado dadka isticmaala inay ku duubaan fiidiyowyo lagu ciyaaro miiskooda ama bog furaha internet-ka. Barnaamijka, oo leh interface isticmaale aad u fudud oo nadiif ah, sidoo kale waa mid aad u fudud in la...
Free AVI to MP4 Converter waa barnaamij bilaash ah oo fiidiyoow fiidiyoow ah oo loogu talagalay dadka isticmaala si loogu badalo faylasha fiidiyowga AVI ee fiidiyoowgooda adag ee MP4 video files. Si ka duwan barnaamijyada kale ee fiidiyoowga fiidiyowga ee suuqa, barnaamijka, oo aan u fidinayn dadka isticmaala goobo gaar ah, ayaa gabi...
Nooca Lite ee Winamp, oo aan garanaynay sannado, waa beddel yar oo gaar ahaan loogu talagalay dadka isticmaala netbook. Dhammaan isticmaaleyaasha hela astaamaha muusigga aasaasiga ah ayaa aniga igu filan halkii aan ka isticmaali lahaa astaamaha ballaaran ee Winamp sidoo kale waxay doorbidi karaan nooca nalka. Dhibaato laaan dhib badan oo...
HyperCam waa barnaamij duubitaan shaashad bilaash ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku duubaan sawirka shaashadooda fiidiyoow ahaan. Isticmaalka kumbuyuutarka maalinlaha ah ama nolosheena ganacsi, waxaan u baahan karnaa duubista shaashadda shaashadda sababo kala duwan awgood. Mararka qaarkood waa inaan sameynaa fiidiyowyo...
ScreenTake waa codsi wax ku ool ah oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh ugu qaadatid shaashadda hal guji ama aad ku duubato GIF-yada firfircoon oo aad hesho xiriir gaaban. Barnaamijka, oo leh waxyaabo lagu daray marka lala barbardhigo kuwa la tartamaya, waxaa loo fidiyaa oo keliya Windows, laakiin sidoo kale wuxuu caddeeyaa guushiisa...
iTunes, ciyaaryahanka warbaahinta xorta ah iyo maareeyaha ay soo saareen Apple ee Mac iyo PC, halkaas oo aad ka ciyaari karto oo aad ku maamuli karto dhammaan muusikada dijitaalka ah iyo fiidiyowyada, iPod iyo iPod taabashada moodooyinka, tiknoolajiyadda ugu dambeysay ee Apple, aaladaha muusikada ee la qaadi karo, iPhone iyo Apple TV,...
Barnaamijka Rikoodhada Websaydhka wuxuu u soo baxay barnaamij duubista webka oo aad u isticmaali karto si fudud uga duubto kamaradda ku xiran kumbuyuutarkaaga, waxaanan dhihi karaa waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu raaxada badan ee arrintan la xiriira. Sababtoo ah markaad isticmaaleyso barnaamijka, waxaad kaliya waxaad ubaahantahay...
Laga soo bilaabo Sawirka illaa Muuqaalka waa barnaamij fudud oo faaiido leh oo kuu oggolaanaya inaad sameysatid fiidiyowyo adoo adeegsanaya sawirradaada qaabka JPG ee kombiyuutarkaaga. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu daro faylal maqal ah oo qaab MP3 ah fiidiyowyadan. Barnaamijka, waxaad ku goaamin kartaa inta ilbiriqsi sawir walba la...
Fiidiyowga Sawirka waa barnaamij aad u xiiso badan oo faaiido leh oo loogu talagalay dadka isticmaala inay ku abuuraan animations qaab GIF ah iyagoo qeexaya qaybaha la doonayo ee fiidiyowyadooda ay jecel yihiin. Video to Picture, oo ah barnaamij aad u fudud in la isticmaalo, dadka isticmaala waxay si fudud ugu rogi karaan fiidiyaha...